ZOARA FANANTENANA – slider-home
Mitoria ny filazantsara
«Ary hoy Izy taminy : Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra » Marka 16:15.
Filazantsaran ny fampandrosoana
Isaia 60: 1-3 : Mitsangana, mihazavà fa tonga ny fahazavanao, iraka niantsoan’ny Tompo antsika Kristiana rehetra ny ho fiolazantsara velona, hitondra fahazavana eo anivon’ny fiarahamonina, ny firenena ary manerana izao tontolo izao. Tsy misy mitondra jiro ka manarona azy ao amin’ny maizina
Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo,… : Ny Tompo efa nifidy antsika ho vavolombelony ka maniraka antsika ho amin’izao tontolo izao hitory ny filazantsaran’ny fahasoavany. Eo anilantsika hatrany Jesoa Kristy na aiza na aiza alehantsika koa samia mahefa be mandrakariva amin’ny asany.
Feno 150 taona ny fiangonana
Feno 150 taona amin’ity taona 2013 ity ny fiangonana FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo.
Ny 17 Avril 1863 no niorenan’ny fiangonana. Ny tenin’Andriamanitra izay velona sy mahery no antoka mamelona sy mampijoro ny fiangonana nandritra izay taona maro izay.
Atao mandritra ny taona ny fankalazana izany ary nosokafana tamin’ny alahady 03 febroary 2013. Endrika miavaka no niainan’ny fiangonana ny fisantarana izany tamin’ny alalan’ny fanaovan’ny fiangonana iray manontolo akanjo fotsy mandritra ny fotoam-pivavahana rehetra miampy ireo fandravahana ny tranon’Andriamanitra ho tonga toy ny trano lay fotsy.
Ny teny faneva amin’izao fankalazana izao dia ny Hebreo 4:11
« Koa aoka isika hazoto hiditra amin’izany fitsaharana izany,
fandrao hisy olona latsaka amin’ny tsi-finoana tahaka izany koa. »